က အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လူတစ် ဦး ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုစက်မှုလုပ်ငန်းဆုဖြစ်ပါတယ် အရည်အချင်းကို အချိန်အတွက်အချို့သောအချက်မှာလယ်ပြင်၌တည်၏။
အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့သည်စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်ကိုအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှသတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေပြီးအချို့သော (စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအင်စတီကျုကဲ့သို့) အချို့သောသူများသည်သင်ကြားရေးအရင်းအမြစ်များကိုသင်တန်းသားများအားရွေးချယ်နိုင်သည့်အကူအညီအဖြစ်ပေးအပ်သည် (ဖွင့်လှစ် အခမဲ့ဖြစ်သည်!) ။
အချို့သောသူများသည်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုခြင်း (ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်း) ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော်လည်းများစွာသောအောင်လက်မှတ်များမှာအခြေအနေများမရှိဘဲပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ ဥပမာ၊ မော်တော်ယာဉ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည်မကြာခဏသက်တမ်းတိုးရန်လိုအပ်သော်လည်း၊ ပြည့်စုံသောပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကိုနိုင်ငံတကာမှအသိအမှတ်ပြုသည် သြစတြေးလျအစိုးရ နှင့်၎င်း၏စာချုပ်မိတ်ဖက်များအဖြစ်တရားဝင်အကဲဖြတ်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစီမံကိန်းအရာရှိ / ကျွမ်းကျင်သူ / မာစတာ / ဒါရိုက်တာအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အာဏာ။
က အသိအမှတ်ပြုစီမံကိန်းအရာရှိ (CPO) မည်သည့်စီမံကိန်းအဖွဲ့ကိုမှအဓိကပံ့ပိုးသည်။
၎င်းတို့သည်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုလေ့လာမှုနာရီ ၃၀ ခန့်တွင်ဆန်းစစ်ခဲ့ပြီးစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဗဟုသုတများကိုအမျိုးမျိုးသောနေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်တာ ၀ န်ယူသည်။
က Certified Project Professional (CPP) သူတို့လုပ်ဆောင်သောစီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီ၏အခြေအနေတွင်ခေတ်ပြိုင်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများ၊ နည်းစနစ်များနှင့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။
က Certified Project Master (CPM) စီမံကိန်းခေါင်းဆောင်နှင့်တီထွင်သူဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းတို့သည်ကျယ်ပြန့်သောစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အချင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကဲဖြတ်ခြင်းခံရပြီး ၄ င်းတို့အနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနှင့်အခြားသူများ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုစတင်ရန်၊ စီစဉ်ရန်၊ စီမံရန်၊
က အသိအမှတ်ပြုစီမံကိန်းဒါရိုက်တာ (CPD) ရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းများ၊ ပရိုဂရမ်များနှင့်အလုပ်၏ရှေ့ပြေးပုံစံများကို ဦး ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်။
သူတို့ကအဆင့်မြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများအား ဦး တည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။
Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အထားများ Institute မှအတည်ပြု ခေတ်ပြိုင်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏စည်းကမ်း၌တည်၏။ မည်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်၊ နည်းစနစ် (သို့) စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုပုံစံကိုမဆိုလိုက်နာခြင်း (izing ၀ ံဂေလိပြုခြင်း) မပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြုချက်များသည်မည်သည့်စီမံကိန်းအခြေအနေတွင်မဆိုအသုံးချနိုင်သောမြင့်မားသောတိကျခိုင်မာစွာနှင့်လွှဲပြောင်းနိုင်သောအခြေခံစွမ်းရည်ကိုပေးသည်။
အင်စတီကျုအထောက်အထားကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ကြသည် ဝေဖန်တွေးခေါ်; သူတို့သည် ၂၁ ရာစု၏စီမံကိန်းခေါင်းဆောင်များ၊ ပြproblemနာဖြေရှင်းသူများနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်သူများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားများသည်စီမံချက်မန်နေဂျာအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာကိုဖွင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏စျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုကိုတိုးချဲ့သည်၊ သင်၏စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များကိုမြှင့်တင်ပေးသည်၊ စိန်ခေါ်မှုရှိသောစီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းကိုပြသသည်၊ သင့်အားအရေးပါသောစီမံကိန်းများရရှိသည်။
အခမဲ့ရယူပါ အွန်လိုင်းအသိပညာစာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ် - စျေးကြီးသောပြင်ဆင်မှုသင်တန်းများအတွက်မပေးရ
သင်၏ကြိုတင်စီမံချက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသင်ယူမှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းအပါအ ၀ င်အခြားရွေးချယ်စရာဆန်းစစ်မှုရွေးချယ်စရာများကိုစဉ်းစားပါ
လက်ခံရရှိသည် တစ်သက်တာလက်မှတ် - အသင်း ၀ င်ခြင်း၊ စာရင်းသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်လက်ကောက်ခံခြင်းများမလိုအပ်ပါ
အာမခံထားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှု - သင်၏စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်!
ပိုမိုမြင့်မားသောလက်မှတ်နှင့် / သို့မဟုတ်အရည်အချင်းများသို့တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကိုရယူပါ
သင့်ရဲ့တိုးမြှင့် အလုပ်အကိုင်အလားအလာ နှင့်ဆုလာဘ်
ယနေ့အလုပ်ရှင်များသည်“ စက္ကူ PMs ” နှင့် မကျေနပ်ကြပါ။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာများအနေဖြင့်သီအိုရီဆိုင်ရာ၊ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာတိကျသောပ ဟေcompletိ များကိုပြီးအောင် အခြေခံ၍ အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အလုပ်ရှင်များသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်၎င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက် Institute ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
ချက်ချင်းအွန်လိုင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း Linkedin နှင့် OPEN မှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ Institute မှရဲ့မှခညျြနှောငျနေကြသည် စီမံကိန်းပညာရှင်များအတွက်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း
ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အခြေခံသည့်အကဲဖြတ်မှုအတွက် ၂၁ ရာစုချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည်စီမံကိန်းအဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်မန်နေဂျာများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အလုပ်ရှင်အပေါ်သူတို့၏တန်ဖိုးကိုသီးခြားလွတ်လပ်စွာအာမခံနိုင်ရန်အတွက်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။